N'agbanyeghị na-agaghị emeli, Police Isi ese foto ndị ka na-ewu ewu - OMG Solutions
N'agbanyeghị mmachi, ndị uwe ojii Police kamgbe ahụkebe
Igwefoto ahụ na-eyi n’ahụ nwere ihe ọdịda ha, ọ bụghị ihe niile ma dịkwa mma. Akụkụ akụrụngwa a nwere nsogbu ụfọdụ ọ na-eche ihu na okwu ndị na-ebilite tumadi mgbe ejiri ya mee ihe ma ọ bụ jiri ya mee ihe na-ezighi ezi. Anyị ga-edepụta ole na ole n'ime ndị a ma jiri nlezianya na-ekpe ikpe ma ọ bụrụ na, n'agbanyeghị uru ọ bara, enwere ike ileghara ọdịda ndị a anya? Mmetụta dịkwa a doesaa ka mmachi a ha na-eweta?
Ego na nchekwa
Mgbe ọ bụla anyị chọrọ izo aka na ọghọm dị n'ime usoro a, nsogbu abụọ nwere obi ike na-abata n'uche bụ ego na oghere. Enwere nsogbu mgbe niile etu esi echekwa vidiyo ndị a, ọbụlagodi mkpa ịzụ ndị ọrụ nchekwa etu esi eme nke a na-ebilite. Nwere ike ịzụta igwefoto maka ihe ruru otu puku dollar, ihe omume a abụghị nsogbu kama ịchekwa na ebe a na-edebe ihe, ịde ihe na nhazi kwesịrị ekwesị iji nwee ike iru ngwa ngwa maka vidiyo mgbe achọrọ. Nke a ghọrọ nnukwu nsogbu n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ uwe ojii na-ekwu na ha nwere ike ichekwa ego ọzọ agaraghị enwe na ikpe mpụ, ịchekwa nnukwu vidiyo data ndị a bụrụ ihe ịma aka ọzọ.
N'ime ọkwa dị ugbu a, nke ejirila mepụta igwefoto ahu, igwefoto abughi onye nlere anya anya ka anyị na-ahụ na FSI. FSI bụ mpempe teknụzụ nke nwere ike iso ebe anya na-ele ma na-eji mgbamgba na-elekwasị anya na lekwasịrị anya. Ọ nwere ike gbanwee anya ya na anya na microseconds. Emere igwefoto ahu n’uzo di otua; inwere ike ile otu ebe ma ịghara ijide ihe na - eme na mpaghara ahụ, ọ ga - ekwe omume ịghara ịhụ ihe na - eme ugbu a n'ihu gị na igwefoto.
N'itinye igwefoto ntakịrị karịa anya, ọ gaghị ekwe omume igwefoto ịnakwere ma mee ihe kwekọrọ na nhụsianya ma ọ bụ ọnọdụ uche nke onye ahụ nwere ike ịnabata. Nke a na - eme ka ọ ghara ịghazi otu ọnọdụ. Anya nwere ike inyocha ihe osise ịlanarị adịghị mkpa ma ọ bụ na-eme gburugburu ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ s ka ọ pụọ ngwa ngwa otu ọnọdụ. Ọ bụ ezie na atụnyere anya mmadụ na igwefoto ahụ mebere ya, ọ na-ada nke ukwuu, mgbe ị nwere ike ịnọ n'ihe egwu, ụbụrụ gị ga-egosi ihe iyi egwu na-abịarukwu nso ma ga-eme ka ị gbanwee ọnọdụ gị site na mpaghara ahụ. Ihe a maara dị ka “na-achọ” ihe a bụ otu mmachi igwefoto eyi ahụ, ọ na - ejide ya na enweghị nhazi yana ihe na - eme. Ihe ndị a bụ ihe nwedịrị ike ime ka mmadụ tụleghari ihe nkiri ahụ ma emesịa, nwee nsogbu na ịkọ otu ihe nwere ike ime. Ma nke a, buru ezigbo ihe ndọghachi igwefoto eyi ahu.
Edekọghị ọnọdụ dị mkpa dị egwu
Enwere mmegharị dị mkpa, ana-akpọ "ihe nlegharị anya" nke enweghị igwefoto ga-ejide. Ka anyị chee na onye uwe ojii ga-ejide onye na-enyo enyo, mana onye na-enyo enyo na-anwa ịghara iji olu ya. Nke a bụ ihe enweghị ike ijide ya na igwefoto mana mgbe ọnọdụ dị ka ndị a mere. A na-amanye onye uwe ojii ahụ iji ike ndị ọzọ ejide ya. Mgbe a na-ele vidiyo ndị dị ka ndị a mgbe e mechara, a na-ahụkarị ya dị ka a ga - asị na ọfịsa ahụ jiri ike na - enweghị isi iji jide onye na - enyo enyo. Nke a na-eduhie eduhie ka ọ bụrụ ihe na - emezighị emezi maka igwefoto ahụ nwere, nke a nwere ike ibute nnukwu nsogbu na nyocha ahụ.
Nsogbu ozo apuru ighota bu na; ncheta egosighi na ese foto. A na-achọ ndị uwe ojii ka ha nwee ahụmịhe n'okwu ha, ndị nkịtị nwere ike ịhụ ọnọdụ na-abata ebe onye uwe ojii nwere ike ịhụ ma chọpụta ụfọdụ ihe egwu na-abịanụ ma mee ihe. Ihe ncheta ma ọ bụ ahụmịhe ndị a egosighi na igwefoto, ọ ga-adị nnọọ ka a ga-asị na ọfịsa ahụ mere ihe ọ bụla. Anyị nwere ike ịnwa ịtụle ọnọdụ ebe onye na-enyo enyo weliri aka ya elu n'otu ụdị, onye nkịtị nwere ike iche naanị na ọ bụ mmegharị nkịtị ma ọ bụ ikewapụ onwe ya, mana dịka onye ọrụ iwu nke nwere ọtụtụ ahụmịhe na ọzụzụ. I chetara ozugbo banyere ihe ndị mere n’oge gara aga ma ọ bụ cheta ọzụzụ na eme ihe.
Ọsọ ndekọ nke ngwa eserese igwe na-eyi, dị ezigbo iche na ngwa ngwa karịa igwefoto CCTV oge niile na ụlọ ahịa ma ọ bụ ebe ọrụ. N'ihi ọsọ a ndekọ, ụfọdụ ihe nwere ike ime ngwa ngwa ọ ga-efu n'etiti-etiti. Okwu dị ka nke a nwere ike ime ka ihe dị mma ma ọ bụ mịrị amị, nke nwere ike ịdị oke mkpa na nyocha nwere ike ịhapụ ọsọ a na-agba. Ihe ọzọ furu efu bụ mmemme na oge mmeghachi ahụ. Yabụ na onye uwe ojii na-agbapụ ma ọ bụ na-egbochi égbè ahụ, enwere ike ịhụ ihe a na-eme na ịkọwa ya na-ezighi ezi n'ihi ya na-akpata nsogbu.
Ike nke igwefoto ka ị hụ ihe nlere nke ọma
O nwere oge mgbe a na-egwu vidiyo egwu, mpaghara ọkụ dị ala na-apụta ìhè nke ukwuu nye ndị na-ele ya, ha enweghị ike ịchọpụta ma ọ bụ hụ ihe onye na-ahụghị anya na ọnọdụ a na-atụle enweghị ike ịhụ. Otu onye uwe ojii nwere ike daa n’ala ọwara na-arịọ onye na-enyo enyo ka ọ pụta ngwa ngwa, o nwere ike kpebie ịbịa ma nwee ike ijide ekwentị ma ọ bụ ihe n’aka. Onye uwe ojii ahụ nwere ike inyo ya enyo ma ọ bụ ihe ọ bụ egbe, ọ nwere ike iwe iwe ịgba egbe. Ihe ndị a bụ ihe nlere anya nwere ike ime ka nyochawa vidiyo siri ike. A na-ahụkwa ya na igwefoto anaghị enwe ike ịdabere na ọkụ mgbe niile, ha nwere ike isi na nke na-achapụ ọkụ na-achapu ike na sekọnd na-ewepụ nkọwa dị oke mkpa na-elekwasị anya.
Limitationsfọdụ ike ndị ọzọ bụ:
Agbamume nke ịkọ nkọ nke abụọ na - enweghị ike ihu ma ọ bụ ghọta otu ebe dị mma, n'ọtụtụ oge, ha nwere ike ịnọ anya na ọnọdụ dị adị.
Igwefoto otu nwere ike zuru ezu imezu ihe achọrọ
Igwefoto nwere ike idekọ X-XXX
Mgbe ụfọdụ, ahụ gị nwere ike igbochi echiche dị mkpa
Nzuzo 5538 1 Echiche Taa